PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish iyo Spectrwm: 5 WM oo kale oo loogu talagalay Linux | Laga soo bilaabo Linux
Maanta waxaan sii wadaynaa kuweena boostada toddobaad ku saabsan Maareeyayaasha Daaqadaha (Maareeyayaasha Windows - WM, Ingiriis ahaan), halkaas oo aan dib ugu eegi doonno waxyaabaha soo socda 5, liiskayaga 50 hore looga hadlay.
“Maareeye Daaqad soo jiita oo loogu talagalay dadka jecel kumbuyuutarka. Loogu talagalay in lagu awoodo in lagu ciyaaro nidaamkaaga. Sidan oo kale in isticmaale kasta oo xiiso leh, oo aan ahayn Linux Geeks oo horumarsan, uu beddeli karo muuqaalkooda oo uu wax ka qaban karo hab-dhaqanka miisaskooda iyo daaqadaha. Iyo fududahay in la isticmaalo, iyada oo ay ugu wacan tahay bilowgeeda degdegga ah ee ka fogaanaya akhrinta dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaadey in kabadan 7 sano kahor.
Waxay bixisay hagaajin aad u fiican (dejin) oo ay weheliso quruxda xalka u diyaarka ah ee isticmaalka.
Waxay lahayd astaamo ama waxqabadyo xiiso leh waqtigeeda, sida daahfurnaanta goobta shaqada iyo dejinta otomaatiga daaqadaha gaarka ah, iyada oo ay ugu wacan tahay qaabeynta barnaamijyada caqliga badan.
Waxay u oggolaatay inay beddesho dhinac kasta oo ka mid ah, iyada oo loo marayo isbeddello yaryar oo lagu sameeyay faylalka qoraalka si fiican loo diiwaangeliyey. Dhamaan hal meel, oo leh qaabeyn otomaatig ah. Diiwaanka ~ / .playwm waxaad ka heli kartaa dhammaan faylasha qaabeynta ee qaybaha kala duwan ee PlayWM. Marka la soo koobo, waxaa laga dhisay codsiyo kala duwan oo ku midoobay hal meel, hoosta dukumiintiyada wanaagsan oo cad ee ku qoran qaabka faallooyinka.
Kuwa soo socda ayaa awood u leh soo dejinta iyo rakibidda isku xirka.
“Maareeyaha Daaqadda nooca Tiling-ga oo dhameystiran, kuna qoran kuna qaabaysan Python".
Tipo: Dharka. In kastoo, inbadan waxay u muuqdaan inay u tixgeliyaan nooca Dynamics.
EWaa wax fudud, yar oo la dheellitiri karo. Waxayna kuu ogolaaneysaa inaad si fudud u qaabeyso una dhex gasho nashqadahaaga, aalado iyo amarro u gaar ah, si aad u hagaajiso oo aad u hagaajiso qulqulka shaqada ee muuqaalka muuqaalka qaabka isticmaalaha u shaqeynayo.
Waxaa lagu qoray oo loo qaabeeyey gebi ahaanba Python, si looga faa'iideysto dhammaan awoodda iyo dabacsanaanta luqaddan oo loogu habeeyo baahiyaha kuwa badan.
Waxay leedahay bulsho firfircoon oo sii kordheysa, had iyo jeer amaah si ay u caawiso kuwa kale.
Gabi ahaanba waa Bilaash iyo Furan Software Source, waxaana sidoo kale loogu qaybiyaa ruqsadda oggolaanshaha ee MIT.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan soo dejinta, wararka iyo rakibidda, xiriiriyeyaasha rasmiga ah ee soo socda ayaa la heli karaa: 1 link, 2 link y 3 link. Iyo tan kale xiriirka dibadda wixii macluumaad rasmi ah.
“Maareeye Fudud oo fudud oo aan lahayn ku-tiirsanaanta maktabadda, oo aan lahayn sawir-gacmeedyo qurxoon, oo aan lahayn qurxin daaqad daaqad leh, iyo ku tiirsanaan jiir. Waxaa si aad ah loogu qaabeeyey GNU Screen oo sameeya waxyaabo yaab leh oo ka socda suuqa terminal dalwaddii.".
Mashruuc aan firfircooneyn: Waxqabadkii ugu dambeeyay ee la ogaado wax ka badan 3 sano ka hor.
Waxay oggol tahay shaashadda in loo qaybiyo looxyo aan is dul-saarneyn. Iyo in daaqadaha oo dhan lagu habeeyay iskudhafkooda si looga dhigo inta ugu badan shaashadda dhabta ah ee la isticmaalay.
Waxaa loo qaabeeyey iyada oo loo marayo feyl qoraal fudud. Oo waxay ku bixisaa is-dhexgal raaxo leh oo deg-deg ah iyada oo loo marayo furayaasha miiqyada. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay khariidad horudhac ah si loo yareeyo taabashada muhiimka ah ee curyaamisa Emacs iyo qaybaha kale ee tayada leh ee software-ka.
Waxay u adeegi kartaa labadaba barnaamij bilaw ah iyo ogeysiis ogeysiis ah. Baarka macluumaadkiisa waxaa la soo bandhigayaa oo keliya markii loo baahdo, mana ku jiro saxaarad nidaamka.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo ratpoisonSidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
"AMAn Maamulaha daaqada loo kordhin karo oo adeegsada luqad qoraal ku saleysan Lisp. Siyaasaddoodu aad ayey u yar tahay marka loo eego inta badan Maareeyayaasha Daaqadaha. Hadafkaagu waa inaad si fudud ugu maamusho daaqadaha sida ugu macquulsan uguna soo jiidashada badan. Dhammaan shaqooyinka heerka sare ee WM waxaa lagu hirgeliyaa Lisp si loo ballaariyo mustaqbalka ama dib loogu qeexo".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday wax yar ka badan 3 sano ka hor iyadoo la sii daayay nuuciisii ​​ugu dambeeyay # 1.12.90, hase yeeshe barta ay ku taal ee GitHub markii ugu dambeysay ee ay sameyso waxay ka yartahay bil ka hor.
Waxay leedahay karti-qabad awood leh oo awood u leh, oo macnaheedu yahay in ficil ahaan dhammaan howlaha ay bixiso Sawfish ay ku xirnaan karaan furayaasha (ama badhanka jiirka).
Waxay bixisaa maaraynta wanaagsan ee dhacdooyinka, si aad u astaysto habka ay uga jawaabi doonto iyaga.
Waxay u oggolaaneysaa maaraynta isku dhacyada u dhexeeya daaqadaha, iyadoo la maareynayo in marka daaqadaha qaarkood ay ku soo beegmaan xeerar dhowr ah, ay si toos ah ugu hoggaansamaan tallaabooyinka qaarkood.
Waxay leedahay mawduucyo wanaagsan oo mawduucyo dabacsan, oo kuu oggolaanaya inaad abuurto mawduucyo aad uga duwan kuwii hore. Waxaa intaa dheer, waxay leedahay noocyo kala duwan oo wanaagsan oo mawduucyo dhinac saddexaad ah oo la heli karo.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmoSidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka ama kuwaan kale: isku xidhka 1 y isku xidhka 2.
"AMAMaareeyaha Daaqad yar oo firfircoon oo loogu talagalay X11 oo isku dayaya inuu ka baxo jidka si booska qiimaha leh ee dhammaystiran ee shaashadda loogu isticmaalo waxyaabo aad muhiim ugu ah isticmaalaha".
Mashruuc firfircoon: Waxqabadkii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday waxyar ka yar 3 bilood kahor iyadoo la soo saaray noocii ugu dambeeyay (3.4.1), inkasta oo waxqabadyadii ugu dambeeyay lagu xusay.
Waxay leedahay dejin aad u fiican oo qaabeynta qaabeynta, umana baahna barashada luuqad barnaamij si loo sameeyo isbeddello qaabeynta ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u qoreen jabsadayaasha jabsadayaasha, waxayna ku dadaalaysaa inay yaryihiin, is haysta, oo dhakhso badan.
Abuuritaankeeda inta badan waxaa dhiirrigeliyay "xmonad" iyo "dwm" WMs. Qaadashada waxa ugu fiican labadaba, si loo abuuro WM aad u adag, dhammaystiran laakiin la maamuli karo oo la isku haleyn karo.
Waxaa lagu sii daayay shatiga ISC. Sharootadaada waa la aqbali karaa, illaa inta ay sidoo kale shati ka haystaan ​​ISC.
Waxyaabaha kale ee xusida mudan waxaa ka mid ah: Dynamic RandR support, meel kasta oo laga mariyo dhamaan shaashadaha oo leh kumbuyuutar ama jiir, heerka xaalada la beddeli karo, feylka qaabeynta bina aadamka la aqrin karo, dib loo bilaabi karo iyadoo aan lumin xasilloonida, deg deg deg deg ah daaqadaha waa lagu dari karaa ama laga saari karaa aagga weyn.
WM-kan la cusbooneysiiyay waxaa badanaa laga helaa bakhaarro badan oo kala duwan GNU / Linux Distros, magaca xirmo "spectrwm"Sidaa darteed, waxay kuxirantahay maareeyaha baakadka loo adeegsaday, garaaf ahaan ama terminal, si fudud ayaa loo rakibi karaa. Macluumaad dheeraad ah oo dheeri ah oo ku saabsan WM ayaa laga heli karaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan kuwan soo socda 5 «Gestores de Ventanas», kana madax bannaan wax kasta «Entorno de Escritorio»loo yaqaan PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish iyo Spectrwm, noqo mid dan weyn iyo dan u leh, dhammaan «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » PlayWM, Qtile, Ratpoison, Sawfish, iyo Spectrwm: 5 WMs oo kale oo loogu talagalay Linux
Waxay ila tahay aniga shaashadda WM kasta inay noqon doonto mid aad u sharraxan, hase yeeshe waad ku mahadsan tahay macluumaadka 🙂
Ku jawaab Chiwy
Salaan, Chiwi. Waad ku mahadsantahay faalladaada. Xaqiiqdii way fiicnaan laheyd, laakiin sida muuqaalka WM kasta isbeddelayo waqti ka dib, waxa ugu habboon ayaa ah in la aado xiriiriyeyaasha rasmiga ah ee mid kasta oo si toos ah loogu arko shaashadda rasmiga ah ee ay bixiyaan horumariyeyaashoodu. Xaqiiqdii dhammaantood ma bixiyaan shaashado, laakiin badankood ayaa sameeya oo cusbooneysiiya, illaa iyo inta ay yihiin mashaariic firfircoon.
Android 11 horey ayaa loo sii daayay, ogow isbeddelada ugu muhiimsan iyo wararka
Huawei wuxuu qorsheynayaa inuu sii daayo HarmonyOS bedelka Android ee 2021